Akụkọ - Usoro ngwaahịa mmezi
Usoro mmezi usoro eji eme ihe
Jiri ncha dị nro dịka ncha ehicha mmiri na mmiri ọkụ maka nhicha. Itucha nke ọma iji wepu ncha niile ma jiri nwayọ kpoo. Hichapụ ihe ndị dị ọcha ma sachaa kpamkpam mmiri ozugbo ngwa ngwa. Kpochapu uzo obula nke dakwasiri n'elu ebe di nso.
Ule nke mbu - Nwalee ihe nhicha gị na ebe a na-ahụghị anya tupu itinye ya na elu dum.
Ekwela ka ndị na-ehicha ihe rie - Ekwela ka ndị na-ehicha ihe nọrọ ọdụ ma ọ bụ banye na ngwaahịa ahụ.
Ejila ihe eji eme ihe - Ejila ihe nhicha nke nwere ike icha ma obu mechie elu. Jiri nro dị nro, nkwọcha mmiri ma ọ bụ akwa. Ejila ihe abrasive mee ihe dị ka ahịhịa ma ọ bụ ihe mgbochi ịchacha ọcha.
PRacha ọcha ngwaahịa-na-ere ngwaahịa
Ọnọdụ mmiri na-adịgasị iche iche na mba ahụ. Chemicals na mineral na mmiri na ikuku nwere ike ijikọta iji nwee mmetụta dị njọ na njedebe nke ngwaahịa gị. Tụkwasị na nke ahụ, ọlaọcha nickel na-ekenye ụdị njirimara na ọdịdị ya na ọlaọcha mara mma, na ịmịcha obere ihe dị mma.
Maka nlekọta nke ngwaahịa chrome, anyị na-akwado ka ị sachapụ ihe ọ bụla metụtara ncha ma jiri nwayọ kpoo ya na akwa dị ọcha dị nro mgbe ojiji ọ bụla. Ekwela ka ihe dị ka ntacha eze, ihe nhicha ntu ma ọ bụ ndị na-ehicha caustic ka ha dịrị n'elu.
Nlekọta a ga - ejigide akwa gloss nke ngwaahịa gị ma zere ịchọta mmiri. Ntinye oge nke ihe dị ọcha, nke na-enweghị ihe ọ bụla na-enye aka iji gbochie ikpochapu mmiri na ntanye ọkụ na akwa dị nro ga-emepụta akwa ọkụ.
ILEKỌTA MIRROR ngwaahịa
E gosipụtara iko na ọlaọcha na ngwaahịa enyo. Jiri naanị akwa mmiri dị ọcha. Ndị na-ehicha Amonia ma ọ bụ mmanya nwere ike imebi enyo ndị na-awakpo ma mebie ọnụ na nkwado nke enyo ahụ.
Mgbe ị na-ehicha, gbanye akwa ahụ ma ghara ịgba ya na enyo ma ọ bụ gburugburu ya. A ga-elezi anya mgbe niile iji zere ihu na nkwado nke enyo ahụ. Ọ bụrụ na ha ga-agba mmiri, kpoo ozugbo.
Ejila ihe nhicha abrasive n'akụkụ ọ bụla nke enyo ahụ.
Post oge: Mee-23-2021